Vadzidzi veBhaibheri Vakaramba Vakashinga “Paawa Yokuedzwa” | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Vakaramba Vakashinga “Paawa Yokuedzwa”
KUTANGA kwakaita Hondo Yenyika 1 muna 1914 kwakazoita kuti nyika izive kuti Vadzidzi veBhaibheri vaisapindira mune zvehondo. (Isa. 2:2-4; Joh. 18:36; VaEf. 6:12) Vashumiri vaMwari vaiva muBritain vakaita sei panyaya iyi?
Muna 1916, Britain yakadzika Mutemo Wechiuto waimanikidza varume vasina kuroora vainge vaine makore 18 kusvika ku40 kuti vapinde muchiuto. Mutemo wacho waiti vaya vairatidza zvepachokwadi kuti “zvavanotenda kana kuti hana yavo” hazvivabvumiri kupinda muchiuto vaipiwa rusununguko irworwo. Hurumende yakaumba matare aisarudza kuti ndivanaani vaizopiwa mvumo yokusapinda muchiuto uye kuti vaizopiwa rusununguko rakakura sei.
Pasina nguva, Vadzidzi veBhaibheri vanenge 40 vainge vaiswa mumajeri echiuto uye 8 vainge vaendeswa kuhondo kuFrance. Izvozvo zvakaita kuti hama dzokuBritain dzitumire Mutungamiriri weHurumende, Herbert Asquith, tsamba yaitaura kuti vaisabvumirana nokuiswa mujeri kwaiitwa hama dzavo uyewo chikumbiro chokuti dzisunungurwe chaiva nemasiginicha 5 500.
Hama dzakazonzwa kuti vaya vasere vainge vaendeswa kuFrance vainge vatongerwa kuti vaizopfurwa pamusana pokuramba kurwa muhondo. Asi pavainge vava kuda kupfurwa, vakachinjirwa mutongo vakapiwa makore gumi mujeri. Vakadzoserwa kuEngland vakanoiswa mumajeri aingoiswawo vanhu vose.
Nokufamba kwenguva, varume vakaroora vainge vava kumanikidzwawo kupinda muchiuto. Nyaya yaizoshandiswa kutonga dzimwe nyaya dzakadai yaiva yaHenry Hudson, chiremba uye Mudzidzi weBhaibheri. Musi wa3 August 1916, dare romuManchester, England rakati aiva nemhosva, rikamubhadharisa faindi uye rikamuisa mumaoko emauto. Panguva imwe chete, imwe nyaya yakadaro yakatongerwa muEdinburgh, Scotland. James Frederick Scott, mucolporteur aiva nemakore 25 akanzi haana mhosva. Hurumende yakakwidza nyaya yacho asi yakabva yazosiyana nayo ichifarira imwe yaitongerwa muLondon. Panyaya iyi, imwe hama yainzi Herbert Kipps yakanzi ine mhosva, ikabhadhariswa faindi uye yakaiswa mumaoko emauto.
Pakazosvika September 1916, hama dzinosvika 264 dzainge dzakumbira kuti dzisashande muchiuto. Vashanu vavo ndivo vakabvumirwa, 154 vakanzi vaite mabasa akaoma anobatsira nyika, 23 vakapiwa mabasa echiuto asi asiri ekurwa, 82 vakanzi vaende kuhondo uye vamwe vavo pavakaramba vakatongerwa kugara mujeri. Vanhu havana kufara nemabatirwo aiitwa varume ava saka hurumende yakavabvisa mujeri remauto vakanopiwa mabasa asiri echiuto mumisasa yevasungwa.
Edgar Clay naPryce Hughes akazova mutariri webazi kuBritain vaiita basa rokugadzira dhamu kuWales. Kana ari Herbert Senior, mumwe wevasere vainge vadzoka vachibva kuFrance akaendeswa kujeri rokuWakefield muYorkshire. Vamwe vakapika mujeri rinonzi Dartmoor vachishanda zvakaoma uye vachiitirwa utsinye uye imomo vakasvika pakuva boka rakakura revanhu vairamba kuenda kuhondo nemhaka yehana.
Mudzidzi weBhaibheri anonzi Frank Platt ainge abvuma kuita mabasa echiuto asi asiri ekurwa akatambudzwa kwenguva refu uye zvine utsinye paakaramba kubata pfuti. Atkinson Padgett uyo akadzidza chokwadi achangobva kunyoresa kuti ashande muchiuto akaitirwawo utsinye nevakuru vehondo nokuti ainge aramba kupinda muhondo.
Kunyange zvazvo hama dzedu mumakore anoda kusvika zana apfuura dzaisanyatsonzwisisa nyaya yekusapindira mune zvehondo, dzaiedza kufadza Jehovha Mwari. Vaya vadudzwa nemazita munyaya ino vakaratidza muenzaniso wakanaka wokusapindira mune zvehondo zvinhu pazvainge zvakaoma chaizvo “paawa yokuedzwa.” (Zvak. 3:10)—Kubva Mudura Renhoroondo Yedu kuBritain
Zvine mwoyo wokuda kuzopandukira hurumende here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Vakaramba Vakashinga “Paawa Yokuedzwa”
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA May 2013
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA May 2013